Ngwọta - Shenzhen Joint Technology Co., Ltd
More na ndị ọzọ ụlọ ọrụ mma ha nsoro management na ezi uche na-eme ndokwa ụgbọala dispatchingwith Fleet Management System, nke ọ bụghị nanị rụọ ọrụ nke ọma na-emesi nche nke ugbo ala na oke ọnụ, ma na-ebelata arụmọrụ-akwụ ụgwọ.
N'aka Of Parctice
Anyị kewaa Fleet Management atọ akụkụ: ndị mmadụ, ugbo ala na cargos. The "Ndị mmadụ" ebe a na-agụnye ndị ọkwọ ụgbọala na passengers.We nwere ike rụọ ọrụ nke ọma na-elekọta ndị na-akwọ ụgbọala arụmọrụ na-akwọ ụgbọala oge nke ọkwọ ụgbọala na irè Nchikota RFID technology, igwefoto na GPS ọnụ. Ọzọkwa, anyị pụrụ rụọ ọrụ nke ọma-ekwe nkwa na nchekwa nke ọkwọ ụgbọala site alerts na mberede Mkpu.
Fleet Management: Anyị nwere ike soro iche iche informations banyere ugbo ala na ozugbo, na-enye ndị ahịa na ezi ajụjụ ọrụ nke ugbo ala 'location.The ugbo ala nwere ike rụọ ọrụ nke ọma zipụrụ mgbe o doro anya na ebe ọ maara na ugbu mmegharị nke ugbo ala. Ọzọkwa anyị pụrụ n'ụzọ doro anya mara mmezi ọnọdụ nke ugbo ala. Anyị pụrụ ime ka a na-aga-atụmatụ maka ugbo ala n'ọdịnihu, nakwa dị ka na-eme ka zuru ezu njem plan management.
Asset Management: Nyochaa na-agba ọsọ ọnọdụ nke mobile akpan owo n'ụzọ via igwefoto technology, ụzọ magnetik itinye n'ọkwa technology, mmanya-koodu ịgụ isiokwu technology, RFIDtechnology, GPS technology, wireless nnyefe technology, wdg, ya mere, dị ka iji nweta ihe irè nnyefe management, nke nwere ike n'ụzọ dị irè na-ezere na ihe bara uru, na-zuru, na-apụnara na efu.
gburugburu ebe obibi-echebe
ibu ọrụ na ihe ize ndụ
1.The management n'elu ikpo okwu na-akwado 10 languages2.Real oge nlekota na akụkọ ihe mere eme nsuso review3.Route atụmatụ / mpaghara atụmatụ 4.Vehicles arụ ọrụ na-akọ 5.Real oge Mkpu na mkpu akụkọ.
Dị Mkpa abịa Hardware Products
Nkọwa chọpụta àgwà, ịta ghara ika
Lọjistik Transportation Fleet Management Ngwọta
School Bus Fleet Management Ngwọta
Post Transport Fleet Management Ngwọta
Refrigerated Transportation Fleet Management Ngwọta
Tagzi Fleet Management Ngwọta